Zimbabwe increases fuel prices again, but pumps remain dry | Info Israel
ANALYSIS-In Zimbabwe, risk perception trumps orthodoxy as inflation soars >>
Cricket-ICC suspends Zimbabwe Cricket over government interference >>
ICC suspend Zimbabwe Cricket for political interference. The International Cricket Council (ICC) suspends Zimbabwe for failing to ensure there is no government interference in its running of the game. >>
Is Zimbabwe's economy on track?. The return of the Zimbabwean dollar has raised fears about a return to hyperinflation. >>
Power-short Zimbabwe removes barriers to solar energy expansion >>
UPDATE 1-Zimbabwe public worker strike on the cards after pay offer rejected >>
UPDATE 2-Zimbabwe inflation almost doubles, stirring memories of economic chaos >>
UPDATE 3-Zimbabwe inflation almost doubles, stirring memories of economic chaos >>
Zimbabwe drought leaves more than two million people without clean water. A recent drought in Zimbabwe has left more than two million people unable to access clean water, officials say. >>
Zimbabwe drought leaves more than two million without clean water. A recent drought in Zimbabwe has left more than two million people unable to access clean water, according to officials. >>
Zimbabwe public workers threaten strike over wages >>
Zimbabwe state workers accept pay deal, avert strike >>
Zimbabwe suspended from all cricket by sport's governing body over 'government interference'. Zimbabwe's participation in qualifiers for the World T20 is in doubt after the International Cricket Council suspended their membership. >>
Zimbabwe's civil servants protest pay as inflation hits 176%. Representatives of Zimbabwe's government workers Tuesday protested against what they called "slave salaries" as inflation almost doubled to 176%, a decade high that highlights the country's rapidly deteriorating economy >>